Kitra – “Orange pro league 2021”: Ekipa dimy samy manana isa telo avy | NewsMada
Kitra – “Orange pro league 2021”: Ekipa dimy samy manana isa telo avy
Fantatra fa ekipa dimy ny nahazo fandresena ka samy manana isa telo avy, taorian’ny fahavitan’ny andro voalohany, amin’ny fifanintsanana ny “Orange pro league”, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Ny FC Ilakaka sy ny Zanakala FC, ho an’ny kaonferansy atsimo, ary ny Five FC, ny Jet Kintana ary ny Elgeco Plus kosa, ho an’ny kaonferansy avaratra.
Na eo aza izany, tsikaritra tamin’io andro voalohany io ny fahavitsian’ny baolina maty. Tsy nisy afa-tsy sivy mantsy izany, ho an’ireo kaonferansy roa ireo. 2 no ho 1 ny isa be indrindra nivoahan’ny ekipa mpandresy tamin’izany. Nisy fiantraikany lehibe, teo amin’ireo mpilalao, ilay fihibohana nandritra ny fito volana ka tsy niakarany kianja.
Ny hany tsapa ihany koa nandritra io andro voalohany io, ny tsy fisian’ny ady sahala teo amin’ireo fihaonana fa vokatra tamin’ny fandresen’ny ekipa iray avokoa. Ankoatra izay, ekipa roa no resy teo amin’ny kianja filalaovany: ny Fosa Jr Boeny sy ny AS Adema Analamanga. Fihaonana iray no tsy tanteraka tamin’ireo enina voalahatra: ny fifandonan’ny Ajesaia Bongolava sy ny CS-DFC, hahemotra amin’ny fotoana manaraka ho an’ny kaonferansy atsimo.